Ogaden News Agency (ONA) – Qoraxda bari ayay ka soo baxdaa galbeedna way u dhacdaa
Qoraxda bari ayay ka soo baxdaa galbeedna way u dhacdaa
Posted by ONA Admin	/ October 28, 2011
Qofka intaa kuu sheega waxba kuuma aanu faa’idaynin. Taas waxay la mid tahay qof gumaysiga u galay oo isku dayahaya inuu dib u masaxo wuxuu islahaa halganka shacabkaaga ayaad u tartey. Sababtoo ah qofkastoo caqli leh wuxuu garan karaa inuu gorgortanka uu la galay gumausiga ay midaa ahayd. Hadii kale muxuu gumaysiga ugu xishay oo intaasoo kharash ah iyo waqti u galiyay una buunbuuniyaa.
Maqaalkii dheeraa ee Nuradin Jilani cinwaankiisuna ahaa (Understanding Ethiopia’s Culture War in Ogaden: a Meditation with Ngugi wa Thiong’o) tusaalooyinka uu soo qaatay sababta ay Itobiya kolba u soo ugaadhsanayso fanaaniinta ama qaar ku soo caan baxay taageerada halganka shacabka gumaysi diidka ah ayuu ku sheegay inuu qoraaga u dhashay Kenya Mr. Koriri yidhi waa mid taariikh ahaan ay isu adeegsadaan dadka iska soo horjeeda, hadafkiisuna yahay in qofka markuu inkiro oo dacaayadeydo wixii uu horey u aaminsanaa iyo taariikhdiisii hore laga dhigo in shacabkiisii laga adkaaday oo laga xoogbatay. Waana sababta ay xukuumadda Itobiya uga yeedh-siinayso inay caayaan fikradii ay aaminsanaayeen qaar horey u ahaan jiray ama u taageersanaa ONLF. Waana sababta ay kolba qurbaha uga soo ururinayaan qaar horey u ahaa ONLF ama aanan ka mid noqon waligood oo caalamka loo tusayo, si loo yidhaahdo ONLF qalalaase ayaa ka dhex taagan.
Albaabka ONLF wuxuu u furan yahay qofkasta oo doonaya inuu ka qaybqaato halganka uu shacabka Ogadenya ugu jiro inuu aayihiisa ka tashado iyo qofkasta oo doonaya inuu caalamka u soo bandhigo dhibaatada uu cadawga Itobiya ku hayo dadka shacabka ah een waxba galabsan ee haweenka iyo dadka birma-gaydada lagu tilmaamo ee ka reeban qaanuunka dawliga iyo shuruucda diiniga ahba in la dhibaateeyo. Albaabkaa furan waxaa kaloo ka bixi kara qofkii horey uga soo galay markuu doono inuu gumaysiga kaga qaato xoogaa dhaqaale ah is-ceebeyntiisa. Sababtoo ah inuu is-ceebeeyo si aan ahaynoo uu wax kaga helayo gumaysiga ayaaban jirin. Waa inuu ama iska dhigaa duqun la siray oo wax lagu shubtay ama fulay la qasbay oo wax aanu rabin laga sheegsiiyay.
Hadaan hoos ugu foorarsano wareysiga ee Univ.TV la yeelatay dhalinyaro ka mid ah kuwii ka soo shaqeeyay barnaamijkii SC, su’aasha ugu horeysa ee qofka maskaxdiisa ku soo dagdagaysa waxay tahay maxaa ku kalifay dhalinyaradan inay cadawga u tagaan? Waa su’aal mashruuc ah inuu qofka isweydiiyo. Waxaase ka horeysa inuu isweydiiyo maxaa markii hore ku kalifay inay waqti iyo juhdi iyo xamaasad xoogan galiyaan mashruucuu SC? Sababtoo su’aashan ayaa furi u ah midda hore. Sida ay iyagu sheegeen ahna xaqiiqa aan ka dabatag lahayn, dhalinyaradan iyagaa isdiray, kadibna isabaabulay kadibna caalamka meel walba gaadhsiiyay wixii ay ku soo arkeen dadkoodii ay dhex tageen. Jaaliyadaha Somalida Ogadenya iyo kuwa kalee Somaliyeedba waxay ku taageereen inay u sahlaan hawshii ay soo qabteen siday caalamka u gaadhsiin lahaayeen. Isakaashigaa labada dhan ah, dhalintii SC iyo abaabulkii jaaliyadaha (oo la’aantood aanay waxba u hirgaleen) waxaa ka dhashay laba arimood. 1- caalamka oo arkay waxqabadka dhalinyarada iyo dadaalka ay galeen, aqbalayna wixii ay u soo bandhigeen. 2- gumaysiga Itobiya oo markuu dareemay culayska barnaamijka SC, dadaal dheer u galay siduu u kala daadin lahaa is-haysashada dhalinyaradaa iyo in aan qayb 2aad oo barnaamijkaas ah hirgalin. Inuu midaa ku guulaystay iyo in kale mustaqbalka ayaan u daynaynaa.
Wuxuuse ku guulaystay sida muuqata in qayb ka mid ahaa dhalintii SC ay gacanta ku dhigeen Itobiya. Sida aan ku helayno warbixino hoose, waxaa arintaa ka shaqeeyay safaaradda Itobiya ee London gaar ahaan Ina Duulane isagoo adeegsanaya maal iyo sasabaad. Wuxuuna ka soo xaluushay is-qabqabsi dhalinta dhexdooda ahayd oo kuwan hadda u galay lagu eedeeyay anshax xumo iyo hogaansanaan la’aan iyo inay iskala weynaadeen wada-shaqayntii looga baahnaa dhexdooda iyo mashruucii ay wadeen. Waana meelaha uu gumaysiga ka ugaadhsado dadka aan lahayn garaadka ku filan ee laga yaabo inay markoodii horeba u soo galeen halganka ku danaysi iyo i arka i maqla.
Ugu dambayntii maqaal ku qoran Nazret.com oo aad uga hadlaya falaadka ururka gacanta birta ah ku haya xukunka Itobya ayaa wuxuu odhanayaa; “Ururka TPLF wuxuu ogaaday ahmiyadda ay leedahay dagaalka dacaayadda waa hore oo ahayd intuu kula jiray dagaalka xukuumadii Mingisto. Markay la wareegeen taladii dalka, ururka TPLF waxba kama badalin istraartijiyadoodii dagaalka dacaayadda .. (The TPLF learned the importance of propaganda war at the early stage of its armed struggle against the Derg. Since taking power, the TPLF has not changed its propaganda war strategy .. )“
Arimaha loo adeegsanyo Unv.TV waa un istraatijyadaa, hasa ahaatee shacabka S.Ogadenya wuu ka koray hadda heer ay halganka shacabkooda iyo heerka uu marayo kala socdaan Unv.TV iyo kuwa cadawga u gala ee dib u masaxa taariikh hadday ku lahaayeen shacabka dhexdiisa.
walaal aad ayaad ugu mahadsantahay qoraalkan aad soo bandhigtay hase yeeshee waxaan oo kale waqtigaaga haba siinin ma mudna in la xusso qof hungiri kaa qaaday
Markay beeli kaynaan ku tahay meel baad iyo biyo leh waxay sii martaa hayjad cidlo ah oo daal iyo oon badan, waxaa khasab ruux walba ku ah inuu gaadho dagmada la hiigsanayo ee ay noolali kusuuroobi karto, ruuxii geedaha hoos gala oo ka kiciwaaya intuusan gabalku dhicin ayuu libaaxu qaadaa markay beeshu wada dhaafto, ee allow na barii oo na badbaadi.
Ummaddan innagu ma garan karno ka daacad u ah dalkiisa iyo dadkiisa,waxaase og oo kala soocaya Ilaahay oo wax walba daalacanaya. Markaa waxaa inoo fiican intay iyagoo innagu dhex jira ay na dagi lahaayeen Ilaahay ha innaga saaro kuwa laqdabada ku socda.
Alamaxaa tareenka laga daadan may ku qusqaataan kuwi ka horeeyay halkay ku dabeenyeen away saylanti karaygii ay dadka u sheegayeen alamaxaa jaajuus sobaxay